सुनसान रात ! जंगल र मसानघाटको बाटो तर एघार बजे राती को भेटियोस् र जंगलको बाटोमा हेर्नुस त ! - Aajako Nepali Khabar
सुनसान रात ! जंगल र मसानघाटको बाटो तर एघार बजे राती को भेटियोस् र जंगलको बाटोमा हेर्नुस त !
admin - March 8, 2021 March 8, 2021
हिड्दै जाँदा लगभग बस्ती सकियो । पुल तरेर आउने दुई–चार घर पनि पछाडि परेसी अब मलाई करिब आधा घण्टा जंगलको बाटो हिड्नु थियो । जंगल सुरु हुनासाथ सबैभन्दा पैला आउँथ्यो मुसलमानहरुको म#सानघाट– जसलाई हामी भू#त नाच्ने डाँडो भनेर चिन्थ्यौं ।अनगिन्ती चि#हानहरुको थुम्काथुम्की भएको त्यो ठाउँको बारेमा बाले सानैदेखि कथा सुनाउनुहुन्थ्यो । सुत्ने बेला बिस्तरामा सुनेका ती कथाले डराउन दिएर कति पटक त बाहिर जान डराएर बिस्तरामै मूत्र बिसर्जन गरिएको थियो ।
सुनसान रात ! जंगल र म#सानघाटको बाटो । एक जना मात्र साथी भेटाउन पाए पनि हिड्न डर हुदैनथ्यो । तर एघार बजे राती को भेटियोस् र जंगलको बाटोमा ।
तर पनि तर्केर हिडिरहें ।एकैछिन सुनसान भयो । न चरा कराए न भुईमा झरेका पात खोस्रिए । बिल्कुलै शान्त ! आवाज थियो त केवल मेरो हात्तीछाप चप्पलको । पटाक पुटुक पार्दै अगाडि बढ्दै थिएँ– एक्कासी कुउउउउउ गरेको आवाज आयो । म थुचुक्क बसें । डरको कुनै सीमा थिएन । स्याल रोएको त्यो आवाज पैला–पैला गाउँमा पनि सुन्थें तर गाउँमा हुदा डराइदैनथ्यो । आज त सातो गयो ।
सेतो साडीमा कम्मर मर्काउँदै हिडेकी त्यो आइमाईलाई देखेर कि#चकन्या सम्झिएँ । बाले कथामा भन्नुहुन्थ्यो– कि#चकन्याले सधैं सेतो कपडा लाउछन् अनि कपाल जहिले पनि खुल्ला छाड्छन् । हो, त्यस्तै ठ्याक्कै मिल्ने थिई त्यो आइमाई ।
उ अघि–अघि म पछि–पछि । तर एक्कासी उ टक्क अडिई र मतिर फर्किई । म पनि आफ्नै ठाउँमा अडिएँ । भसक्कै डराएँ । मुटुले ठाउँ छाड्या भन्थिम् हो त्यस्तै भयो मलाई । उसले मलाई एकटकले हेरीरही । मैले मुन्टो बटारें । कता जाउँझैं भयो । न अगाडि बढ्न सक्छु न त पछाडि फर्कन ।‘दिपक आऊ न सँगै जाऊँ । मैले तिमीलाई नै कुरेको ।’
उसले हातले इशारा गर्दै बोलाई । म अचम्म परिगे । हैन त्यो को केटी हो ठ्याक्कै कि#चकन्या जस्तो कपडामा ? मलाई पनि चिनेकी रै’छे त । म सुस्त अगाडि बढें । नजिकै पुगेपछि उसको अनुहार हेरें । मैले कहिल्यै नदेखेको र नचिनेको अनुहार रहेछ– बाल विधवाजस्तो । न मेकअप छ न त कुनै गहना । तर राम्री चैं छे ।‘चिनेनौ र ?’उ फेरि बोली । ‘नाइँ चिनिनँ, तिम्ले मलाई चिन्छ्यौ र ?’ डराएरै भए पनि बोलें ।उ खित्का छाडेर हाँस्न थाली । सुनसान जंगलमा राती करिब साढे एघार बजे खित्का छाडेर ऊ हाँस्दा म झनै डराएँ । उसको हाँसो कि#चकन्यासँग मिल्दो थियो । पोहोर साल हलमा हेरेको चलचित्र अमरमा कि#चकन्या बनेकी मेलिना मानन्धरको हाँसो र यो आइमाईको हाँसो ठ्याक्कै उस्तै थियो । यो किचकन्या नै हो भन्ने फिक्स भयो अनि उसले हाँसोका फोहरा छुटाउँदै गर्दा कुलेलम ठोकें ।
पछाडिबाट प्याट्ट काँधमा हिर्काउँदै उ बोली । म झस्कें । अघि धेरै पछाडिसम्म नदेखिने यो आइमाई कसरी मेरो नजिकै आइपुगी ? झनै डरलाग्दो बिषय भयो । गाउँ आइपुग्न अझैं आधी बाटोभन्दा धेरै थियो । म उसँग केही पनि नबोली दौडिएँ । उ पनि म सँगै दौडिइ । डर र थकानले मेरो सास फुलेर स्वाँस्वाँ भयो तर उसलाई थकानको कुनै महसुस नै थिएन ।
बेला–बेला उसले मेरा हात पकड्न थाली मलाई पनि कस्तो–कस्तो अनुभूति हुन थाल्यो । गफैगफमा उसले अंगालो मारेर हिड्न थाली– मानौं उ मेरी गर्लफ्रेण्ड हो । म पनि के कम, जवानीले भरिपूर्ण उमेरमा एक युवती आफै पछि लाग्छे भने कसले बेवास्ता गर्छ होला र ? मैले पनि अंगालोमा कसेरै हिड्न थालें ।‘आज मेरो घरमा जाऊँ, उतै बसौला नि है दिपक ।’जिस्किदै हिडिरहेको बेला उसले एक्कासी प्रस्ताव गरी ।‘कता पर्छ तिम्रो घर ? कति टाढा हो ?’ठीक मेरो घरभन्दा उल्टोतिर उसको घर बताई ।
केही अगाडि हिडेपछि खोला आयो । खोलामा आगो बालेर निभेकाजस्ता थुप्राहरु थिए– जहाँबाट सेतो धुँवा आइरहेको थियो । खोलाको बगरमा पुगेपछि बेग्लै खालको आवाज सुनिन थाल्यो । त्यो आवाज सुन्दा कुनै भुतको चलचित्र हेर्दै गरेको अनुभूति हुन थाल्यो र अलि–अलि डर पनि लाग्न थाल्यो । त्यो आवाजमा उ नाच्न थाली– खित्का छाडेर हाँस्दै ।‘ओए, मलाई डर लागेको छ, तिमी चैं नाच्न थाल्दैछ्यौ है ।’उ नाचेको देखेर मलाई भित्र–भित्रै रिस उठ्दै थियो । तर उ हाँस्दै बोली ‘कमन यार दिपक, इट्स अमेजिङ । हाम्रो दुनियाँमा तपाईलाई स्वागत छ ।’यति भन्नासाथ उतापट्टि बगरमा अरु धेरै सेता साडीवालाहरु देखिए ।
उसले मेरो हात समातेर उतै लान खोजी । त्यसपछि के भयो मलाई थाहा भएन ।अर्को दिन बिहान भयो– झिसमिसे बिहानी । चिसो बगरमा मेरो ना#ङ्गो शरिर थियो । न कपडा थियो न त रातभरि होस । कहाँ लगे, के–के गरे मलाई केही थाहा थिएन । मलाई यति मात्र थाहा थियो– म ज्यूँदै छु । शरिरमा कुनै घाउ थिएन । चोटपटक कतै थिएन । बिहानपख म पूरै होसमा थिएँ ।भु#तप्रेत हुँदैन्न भन्नेहरुका लागि म ज्यूँदो भु#त बनेर बगरमा पल्टिएको थिएँ । हिजोसम्म भु#तप्रेतका फाल्टु कुरामा आफुलाई आधुनिक ठान्ने म चिसो बगरबाट उठेर ना#ङ्गै वनमान्छेसरि घरतिर लागें ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकमा घनश्याम भुसाल बाहिरिए